vendredi, 21 juin 2019 16:03
Carlton: Namarana ny atrikasa ny ministeran’ny indostria sy ny asa tanana
Ny ministeran’ny indostria sy ny asa tanana dia namarana ny atrik’asa omaly alakamisy 20 jona, izay notontosaina tetsy amin’ny Carlton Anosy.
Tetikasa TSARA izay fiaraha-miasa eo amin’ny ONUDI sy ny governemantan’i Norvège.
Izany no natao dia mba hanatsarana sy hampiroboroboana ny asa tanana malagasy.
Efa nisy ny lalam-barotra ho an’ity tetikasa ity ho an’ireo mpanao asa tanana avy any Farafangana.
Manodidina ny 446 eo ny isan’ny mpanao asa tanana voakasika manerana an'i Madagasikara, ka ny 355 amin’ireo dia vehivavy avokoa.
Efa nanomboka tamin’ny Jona 2015 ity tetikasa ity.
vendredi, 21 juin 2019 15:37
Diplaomasia: Handao an’i Madagasikara i Gehrig Harald, Ambasadaoron’i Alemana
Nahavita ny fe-potoam-piasany teto Madagasikara, ny Ambasadaoron’i Alemana, Gehrig Harald mivady, ka tonga nanao veloma ny Praiministra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian.
Nanambara i Harald Gehrig fa tsapan’ny firenena Alemana ny ezaka lehibe vitan’i Madagasikara amin’izao governemanta vaovao tarihin’ny Praiministra Ntsay Christian izao, ary mahabe fanantenàna ny amin’izany. Anisan’ny vokatra notanisainy ny teo amin’ny lafiny tontolo iainana, fitsaràna, ary toe-karena.
vendredi, 21 juin 2019 15:28
Kitra - CAN 2019: Sambasamba ho an’i Burundi, Madagasikara ary Mauritanie
Hanomboka anio ny lalao fiadiana ny Amboaran’i Afrika amin’ny baolina kitra na CAN 2019. Andiany faha-32 amin’ity. Hisantatra ny lalao i Egypta mampiantrano sy Zimbabwe.
Ekipam-pirenena telo no sambany vao handray anjara amin’ny dingana famaranana amin’ny CAN dia i Burundi, Madagasikara ary Mauritanie.
« Hiara-hirona manomboka androany », hoy i Andriatsima Faneva Ima, kapitenin’ny Barea Madagasikara, ao amin’ny pejy fesibokiny. « Omeo hery izahay, andao hifanohana tsy misy fepetra. Tokana ny Malagasy. BAREA ho an’ny Malagasy », hoy izy.
vendredi, 21 juin 2019 15:24
Cite Ambatonakanga - Ambohijatovo: Tapaka ny fifamoivoizana
Tapaka nanomboka ny alarobia 19 jona 2019 ny fifamoivoizana eo amin'ny làlana midina avy eo amin'ny Cite Ambatonakanga miazo an’Ambohijatovo. Misy asa fanamboarana maika tanterahina amin’io ampahan-dalana io.
Andro aman’alina ny asa eny an-toerana, mba hamerenana haingana ny fifamoivoizana, izay kendrena hiverina alohan'ny 26 jona araka ny fanambarana nataon’ny ministeran’ny fanajariana ny tany, ny trano fonenana ary ny asa vaventy.
Manentana ny rehetra ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka hitandro mandrakariva ny fahadiovan'ny tanana, ny fitaovana fikarakarana sakafo, ny fomba fitehirizana sy fikirakirana ny vokatra toy ny "mayonnaise », « fruits de mer »... ho fisorohana ny fanapoizinana ara-tsakafo sy hitsinjovana ny Fahasalamam-bahoaka amin’izao ankatoky ny Asaramanitra izao.
Voakasik’io fanentanana io ireo orinasa mpamokatra, ny isan-tokantrano, ny mpikarakara lanonana, ny mpivatotra hani-masaka (Gargote).
Ho hentitra ny Ministeran'ny Fahasalamana amin'ny fanaraha-maso ny kalitao.
Hiavaka ny fankalazana ny tsingerintaona faha-59 taonan’ny niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara sy ny nijoroan’ny Foloalindahy malagasy amin’ity taona 2019 ity, araka ny fampitam-baovao ataon’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena.
Hisy ny fandraisan’anjaran’ireo Tafika avy amin’ireo firenena vahiny (La Réunion sy Kaomoro ary Maorisy) mandritra ny matso lehibe izay ho atao eny Mahamasina ny 26 jona 2019. Miaramila iraisam-pirenena maherin’ny 20 no handray anjara amin’izany.
Hisongadina ihany koa ny fiatrehan’ny Filoham-pirenen’i Rwanda, Paul Kagame, izay firenena anisan’ny mandroso ankehitriny aty amin’ny faritry Afrika na dia nandalo fahasahiranana aza nandritra ny taona maro.
Natao teo amin’ny Araben'ny fahaleovantena androany maraina teo ny « Marche de l'indépendance » saingy najanona fa avy ny orana.
Mbola baraingo ihany koa ny « bal populaire » sy « podium » tokony hatao manoloana ny Shoprite hanomboka rahampitso, raha mitohy ny orana.
Eo anatrehan'ny resaka fampidinana ny vidi-tsolika, dia naneho hevitra, tao amin'ny pejiny facebook, ny talen'ny serasera eo anivon'ny fiadidiana ny Repoblika, ramatoa Rinah Rakotomanga:
"Nihena 500 ar ny solitany, nihena 150ar ny GasOil,nihena 100ar ny lasantsy,...ireo izay tsy faly mahazo manjifa @ sarany teo aloha".
(Sary nindramina pejy FB Rinah Rakotomanga)
Nisavorovoro teny amin’ireo toby mpaninjara teto an-drenivohitry ny Faritra SAVA omaly alakamisy 20 jona. Efa niely tamin’ny haino aman-jery sy tamin’ny tambazotran-tserasera ny fihenan’ny vidin-tsolika eto Madagasikara, tsy izay anefa fa mbola vidin-tsolika teo aloha no novantanin’ny mpanjifa teny amin’ireo toby mpaninjara.
Ireo mpitatitra no nimenomenona. Rehefa naresaka ny fitakiana ka nanomboka tangorongorona teny amin’ny toby mpaninjara, dia tampoka teo nambara fa tsy misy intsony ny solika eto Sambava.